Dumarka Kacsiga Badan: Sidaan Maku Aragtay Xaaskaaga? - Cishqi.com
Muqdisho (Cishqi) – Maxaa lagu gartaa dumarka kacsiga badan, haddaan si kale u iraahdo dumarka ugu kacsiga badan, maxaase kamid ah astaamaha dumarka kacsiga? jawaabtu waa mid fudud. Marka ay xaaskaaga sameyso calaamado nuucaan ah, xaaskaaga aad ayeey kuugu baahantahay.
Dumarka kacsiga badan wey ka duwan yihiin dumarka kale, sababtoo ah waxay muujiyaan calaamado ka duwan dumarka aanan kacsiga badneyn. Marka aad ku aragto xaaskaaga istarees iyo buuq badan, xaaskaaga waxay u baahan tahay in aad dejiso maskaxdeeda. Ogow marka ay xaasku biyo baxdo, raaxo ay dareento, waxay deyneysaa buuqa iyo istreeska badan, kadibna waxaad arkeysaa iyadoo macaaan ah oo kuu dhoola cadeyneyso.
Dumarka kacasiga badan waa dumar dheyman ah
Xaaladaha dumarka kacsiga badan
Sidee ku dalban karaan dumarka kacsiga badan sida ay galmada u rabaan?
Astaamaha dumarka kacsiga badan
Ugu dambeys talada raga
Alla yaa raga qaar u sheego in dumarka kacsiga badan ay yihiin kuwo dheyman ah, marka ay bilaawdo riin, aah, ooh, kadibna ku xijiso xog xogasho, kuna darto aboowe, macaane, igu wad, ha joojin, markaaas oo kale raga qaarkood hawada ayeey ka baxaan. Ka waran marka aad qabto mid kamid ah dumarka ugu kacsiga badan misana ay leedahay kuunto macaan, dhexduna u yar tahay, goortaasna ay ku tusineyso inaad waxaas adigu leedahay.
Maxaa ka qurux badan marka ay agagaaradaada ku heehaabeyso, si ay ku dareen siiso in ay tahay naag kacsi badan oo raaxada jecel. Si kastaba ha noqotee dumarka kacsiga badan waxaa helo nin nasiib badan, kii helana wuxuu ku duceysto in Aakhiro ay mar kale ku kulmaan.
Dhanka kale astaamaha dumarka kacsiga badan iyo raga isku mid ma aha xagga kacsiga iyo xishoodka, dumarka marka ay kacsi dareemaan waa kuwo aad u xishood badan oo aanan dareenkooda soo bandhigi karin. Si kastaa oo ay u rabto galmada, wey is qarineysaa. Waxaa laga yaabaa in ay aad ugu baahan tahay baahalka ninkeeda (Guska), hadana si toos ah uma dhihi karto. Taasina ma ahan wax fiican oo la sameeyo, sababatoo ah waxa ay xaasku ku keeni kartaa niyad jab.
Sida caadada ah dumarka kacsiga badan kuma soo aado nin wax badan ka yaqaano raaxada guurka waana sababta dumar fara badan aysan u helin raaxo ku filan, calashaan mar walbaa waxay jiiftaan iyagoon qanacsaneyn. Muhiim ma ahan in ninka uu leeyahay baahal weyn (gus weyn) ee muhiimadu waa inuu yaqaano sida loo kiciyo dareenka dumarka. Waxa jiro meelo markii dumarka sidaan looga taabto ay horay kacsi ka dareemaan, xittaa haddii ay yihiin dumarka fircooniga ah.
Sidoo kale raga kacsiga badan iyana waxaa macquul ah in ay guursadaan xaas aanan kacsi badneyn, raaxada aanan sidaa ku ahayn, kaliya in ay ninkeeda baahasha u kala furto, markuu dhameystana isku xirato, raaxada nuucaas ahna waa mid caajis ah, waxa ay sababi karto in ninka uu raadiyo naago kale.
Hadaan u soo laabto xishoodka, Dumarka in ay xishood badan yihiin waxaa og qof walbaa iskuna mid ahan marka loo eego raga, maxaa yeelay waxay ka baqaysaa in ninkeeda uu ku dhaho waxaa tahay naag kacsi badan ama lagu tuhumo in ay tahay naag xun oo dhilo ah. Xusuusnow raga oo idil isku mid ma ahan oo waxay ku xiran tahay hadba ninka sida uu reer magaal u yahay. Raga reer magaalka ah ee hadda jiro waxay aad uga helaan dumarka kacsiga badan, waana ku waashaan, marka ay naagtu u dirto ninka erayadaan oo kale: Dareenka Raga Maxaa kiciyo – Baro Erayo Jaceyl Oo Dareen leh
Bulshadaha qaar gaar ahaan bulshada Soomaalida inta badan waxay aaminsan yihiiniin in dumarka kacsiga badan ee galmada nimankooda ka dalbado in ay yihiin naago dhilo ah oo qof walbaa baahalka dhex gashado, calashaan waxay aaminsan yihiin in dhilooyinka ay wasmada dalbadaan, taasina waa fikrad qaldan oo raga qaar ay aaminsanyihiin. Raga markii la weydiiyo sida ay u arkaan arinta ku saabsan naagaha kacsiga badan, waxay yiraahdaan Dumarka fiican waxaas wey ka xishoodaan iyo bala balaaa.
Sheekada noocaas ah waa wax aan sal iyo raad lahyn, naagta marka ay kacsi badan tahay waxaa waajib ah in ay ninkeeda dareensiiso, macnaha ma ahan in ay ninkeeda toos u dhaheyso ee waxay adeegsaneysaan hab kale, haddey u dhahdana wax ceeb ma ahan.
Waxaan dareemayaa in aan aad kuugu baahanahay, kaliya in aan ku xusuusiyo. Hadduu yahay nin reer magaal ah wuu iska fahmayaa.
Sidoo kale dumarka kacsiga badan wey dalban karaan sida ay u rabaan galmada ama ay u jecelyihiin, maxaa yeealy waa wax ay xaq u leeyihiin in ay nimankooda ka daldabaan.
Haddii ay xaasku jeceshahay in uu ninkeeda ugu galmoodo qaabab kala duwan waxaa fiican in ay ninkeeda dareensiiso, marka ay muujiyo astaamaha lagu garto dumarka kacsiga badan, waxaa laga yaabaa in uu fahmo naagtiisa, hadaba sidee?
Sida caadada ah raga inta badan waxa ay xaasaskooda kala hadlaan raaxada galmada, waana tan in badan ay raga ka siman yihiin. Marka ay guriga ka maqan yihiin, waxaa laga yaabaa in uu xaaska u diro sms qoraal ah oo ku saabsan galmada (Wasmo)
Marka uu waxyaabo nuucaas ah ku soo hadal qaado, waxaa fiican in ay kaga faaiideysato fursadaasi, tusaale in ay weydiiso qaabka uu ugu jecelyahay, kadibna ay tiraahdo, haye anigana qiyaas bal, qaabkee ayaan u jecelahay?
Marka uu jawaab siiyo, hadduu sixi waayo, waxaa fiican in ay u sheegto halka ay ugu jeceshahay, g, goorta ay ugu jeceshahay iyo qaabka ay ugu jeceshahay. Markaas kadib ninku wuxuu bilaabayaa in uu meelahaas abbaaro.
Marka aan ku soo noqdo kacsiga dumarka, siduu ku garan karaan ninka marka ay xaaskiisa u baahan tahay ama ay rabto raaxada sariirta (Galmada)(Wasmo). Jawaabtu wey fududahay.
Sida lagu garto astaamaha dumarka kacsiga badan ma ahan wax adag. Dumarka goorta ay nimankooda u baahan yihiin waxaa jiro calaamado badan oo ay ninka ku dareen siiyaan.
Waxaa suurto gal ah in ninka marka uu guriga ku soo laabto uu arko xaaskiisa oo aad u labisan, caraf badan misana u muuqaato sida aroosad oo kale, calashaan waxay sugeyso waa uun isaga. Marka ay soo xirato dhar qafiif ah oo jirkeeda ka muuqanayo misana ay bilaawdo in ay ku dheg dhegto ninka, markaa oo kale waxay u sarbeebeysaa ninka, in aysan sugi karin.
Marka ay ninka xabadkiisa iyo timahiisa salsalaaxid ku bilaawdo waa astaan kale oo lagu garto dumarka kacsiga badan.
Marka uu ninka guriga ka maqan yahay misana ninka uu yahay nin reer magaal ah, jecelna in mar walbaa ay xaaskiisa uga sheekeyso sheeko wasmo ah ama ku saabsan raaxada galmada, ninka nuucaas ah oo kale, xaaskiisa waxay u soo dirtaa sawiro kacsi badan kuwaasoo ay ku tusineyso jirka macaan ee ay leedahay iyo sida ay ugu baahan tahay xiligaas.
Dumarka kacsiga badan aad ayey u garanayaan sida loo soo jiito ninka ama loo kiciyo dareenka ninka, maxaa yeelay waa kuwo had iyo jeer wax akhriyo kuna xiran website yada ka faaloodo arimaha guurka, qoyska iyo guud ahaan Somalia sida boggeena Cishqi.com oo kale.
Sidoo kale dumarka kacsiga badan waxay garanayaan waxyaabaha kiciyo dareenka nimankooda iyo meelaha jirkooda ay ugu jecelyihiin. Tusaale raga waxay aad u jecelyihiin, marka ay xaaska leedahay dabo weyn ama naaso waa weyn in ay ninkeeda tusiso ka hor raaxada sariirta. Raga qaar aragtida dabada weyn iyo muujinta jirka waxay ka qaadan kacsi saaid ah.
Haddii ay xaaskaaga kamid tahay dumarka ugu kacsiga badan ee aadka u jecel raaxada galmada, waxaa tahay nin nasiib badan, dumarka nuucaas ah ee kacsiga badan aduunka waa ku yar yihiin. Ogow raaxada galmada waxay ka mid tahay qeybaha ugu muhiimsan ee nolosha, waxayna sababi karto in laguugu naco ama laguugu jeclaado, fadlan isku day in aad ka haqabtirto raaxada guurka ee ay u baahan tahay xaaskaaga, maxaa yeelay sida aad adigu u jeceshahay in ay kuugu raaxeyso, ayeey iyaduna u jeceshahay.
Mid kalena ha iloobin, sida aad xaaskaaga ula dhaqanto uun beey iyadana kuula dhaqmeysaa, haddaaad wadaad wadaad iska dhigto, iyaduna wadaad wadaad uun beey kuula dhaqmeysaa, hadaad reer magaal iska dhigtana, iyaduna reer magaal uun beey iska dhigeysaa. Noloshu waxay ku qurux badan tahay in la is fahmo loona raaxeysto si dhab ah, waana sababta ay noloshu mararka qaar u macaan tahay, mararka qaarna ay u qaraar tahay.
Erayo Macaan Oo Xaaskaaga Soo Jiidanayo